Jadon Sancho ayaa shalay dhaliyey saddexley goolal ah oo uu kooxdiisa Borussia Dortmund kaga caawiyey inay 6-1 ku garaacdo Paderborn oo ay Axaddii marti u ahayd, waxaanay ciyaartani u ahayd tii ugu horreysay ee lagu soo bilaabo afar ciyaarood oo horyaalka Jarmalka ee Bundesliga la ciyaaray intii dib bathroom bilaabay.
Laakiin saddexda gool ee uu Sancho dhaliyey ayaa meesha laga saarayaa iyadoo la adeegsanayo sharci qariib ah oo ka diidaya da’yarka reer England in diiwaanka bathroom geliyo saddexlayda.
Saddexda gool ee uu Sancho dhaliyey ayaan xidhiidh ahayn, waxaana u dhaxeeyey mid uu dhaliyey laacibka reer Morocco ee Achraf Hakimi, waxaanu goolkani dhibaato ku noqonayaa in la tixgeliyo saddexleyda uu Sancho shabaqa taabsiiyey.
Sida uu dhigayo sharciga lagu magacaabo ‘Lupenreiner’ ee bathroom adeegsado goolasha laga dhaliyo Bundesliga, saddexda gool ee Jadon Sancho laguma dari doono diiwaanka iyadoo bathroom tixgelinayo saddexlay.
Sharciga ayaa dhigaya in goolasha saddexleyda lagu qorayo ay ahaadaan xidhiidh oo aanay soo dhex-gelin goolal kale oo ay ciyaaryahanno kale dhaliyeen.
Thorgan Hazard ayaa Borussia Dortmund u furay gool-dhalinta, waxaana kusoo xigay laba uu dhaliyey Sancho, laakiin midkiisa saddexaad ayaa waxa kasoo hormaray goolka afraad ee kooxda oo uu dhaliyey difaaca midig ee Actual Madrid amaahda kaga maqan ee Achraf Hakimi, ka hor intii aanu Sancho kusoo laabanin dhalinta.
Jadon Sancho waxay goolashiisu gaadhi kari waayeen heerkii laacibka ay isku kooxda yihiin ee Erling Haaland ee kulankiisii ugu horreeyey ee uu u saftay Borussia Dortmund uu saddexley ku dhaliyey muddo 23 daqiiqadood ah isaga oo beddel kusoo galay, kuwaas oo aanay cidina u dhaxaynin.
Khabiirka kubadda cagta Jarmalka ee Raphael Honingstein, ayaa sharraxay sababta Jadon Sancho uu sharcigani u xakamaynayo, waxaanu yidhi: “Waddanka Jarmalka, sababaha qaarkood, uma tixgelino saddexleyda inay dhab yihiin marka aanay isku xigin. Waxa bathroom baahan yahay inay isku-qayb dhashaan iyo in aanu ciyaartoy kale soo dhex-gelin.”
Dhinaca kale, xidhiidhka kubadda cagta Jarmalka ayaa baadhitaan ku samaynaya ficilkii uu Jadon Sancho iyo Marcus Thuram ay caddaaladda ugu raadiyeen ninkii madoobaa ee lagu dilay Maraykanka ee George Floyd.
Sancho ayaa kaadhka digniinta la siiyey markii uu soo bandhigay funaanaddiisa hoose oo uu kusoo qoray kelmado uu ku yidhi: “George for Justice” oo nuxurkoodu yahay: “George caddaalad ha helo”, laakiin Marcus Thuram ayaan isaga la siinin wax kaadh ah maadaama uu kaliya jilibka dhulka dhigay madaxiisana hoos u foorariyey.
Si kastaba, waxa la eegi doonaa go’aanka ay xidhiidhku soo saaraan iyo waxa ay noqoto ciqaabta lala maagan yahay Sancho iyo Marcus Thuram.